LA OGAADAY: Kulan Champions League Ah Oo 40 Kun Taageerayaal Ah Ay Ka Qaadeen Caabuqa Coronavirus, Sababayna Inuu Ku Faafo Yurub | Laacib.net
LA OGAADAY: Kulan Champions League Ah Oo 40 Kun Taageerayaal Ah Ay Ka Qaadeen Caabuqa Coronavirus, Sababayna Inuu Ku Faafo Yurub
March 26, 2020 Balaleti Comments Off on LA OGAADAY: Kulan Champions League Ah Oo 40 Kun Taageerayaal Ah Ay Ka Qaadeen Caabuqa Coronavirus, Sababayna Inuu Ku Faafo Yurub
Kulan Champions League ah ayaa horseed u noqday in caabuqa Coronavirus uu ku faafo Yurub, sida uu sheegay seynisyahan aad loo qadariyo.
In ka badan 44 kun taageerayaal ah ayaa u safray kulankii u dhaxeeyay Atalanta iyo Valencia ee ka dhacay garoonka Milan ee San Siro bishii la soo dhaafay, madaama garoonka kooxda Atalanta uu aad u yar yahay.
Kulanka waxa uu dhacay 19kii bishii Febraayo iyadoo Atalanta ay 4-1 ku badisay, haatana labada dal ee Italy iyo Spain ayaa ah kuwa uu sida xun saameeyay caabuqa Coronavirus iyadoo uu ku dhacay 70 kun qof halka ay u dhinteen in ka badan shan kun qof.
Bergamo oo ah magaalada ay ka dhisan tahay kooxda Atalanta ayaa ah tan ugu xun ee uu haleelay caabuqa iyadoo laga diiwaangeliyay 3800 kiis halka ay dhinteen 580 qof – qabuuraha ayaa noqday kuwa mashquul ah iyadoo 30 daqiiqo kasta qof la aaso, halka ciidamada militiraga ay qaadayaan naxashka meydadka.
Seynisyahan Professor Francesco Le Foche ayaa yiri: “Waxay u badan tahay in dhowr arimood ay sababeen in caabuqa uu sidaan u faafo.
‘Kulankii Atalanta-Valencia ayaa ka mid ah. Kulan kooxda Atalanta muhiim u ahaa oo ay taageerayaashu qiiradeysnaayeen ayuu ahaa.
”Bil ayaa ka soo wareegtay tan iyo kulankaas. Kumanaan dad ah oo sentimitir isku jira, xabadka isgelinaya islamarkaana qeylinaya waxay keentay inay caabuqa si sahlan isku qaadsiiyaan.
‘Waxaan qiyaasayaa in dadka qaarkiis ay diidanayeen inay seegaan kulankaan madaama ay tikidho heysteen xitaa haddii ay dareemayeen xumad.
“Waali ayay aheyd in taageerayaasha loo ogolaado kulankaas, laakiin waqtigaas wax walba sidaan uma cadeyn. Haatan laguma fekeri karo xitaa in sidaas la sameeyo.”
Valencia ayaa ku dhawaaqday in boqolkiiba 35 in ciyaartoydooda iyo shaqaalahooda uu ku dhacay Coronavirus iyagoo la xiriirinaya safarkii ay ku tageen Milan.
Goolhayaha Atalanta Marco Sportiello ayaa isna laga helay caabuqa iyadoo karantiil la geliyay dhamaan ciyaartoyda kooxda Talyaaniga.
Agagaarka magaalada Bergamo ayaa bandow lagu soo rogay afar maalmood ka dib kulankaas madaama uu si aad ah sarre ugu kacay dadka uu haleelay caabuqa.
Duqa magaalada Bergamo oo lagu magacaabo Giorgio Gori ayaa kulankii San Siro ku tilmaamay sida bombaano oo kale isagoo aamisan inuu sababay in caabuqa uu ku faafo Yurub.
Waxa uu yiri: “Ciyaartaas waxay aheyd sida bambaano oo kale. Waqtigaas ma aanan ogeyn waxa dhacayay.
“Haddii caabuqa uu markaas jiray, 40kii kun ee garoonka soo xaadiray waa ay wada qaadeen.
“Cidna ma ogeyn in caabuqa uu nagu dhex jiray.”